4 dhidibka CNC router Machine 1 ...
3 dhidibka 4 dhidibka 6090 CNC ...
Mashiinka Mashiinka CNC 1530 ...
Mini Fiber Laser Calaamaynta Ma ...
Min.Order Tirada: 1 Qabo / Xabbado
Supply Kartida: 50 xabbo / xabbo bishii kasta
Dekadda: Qingdao, Shanghai
1.DA1530 oo leh miis Aluminium T-slot miis waa mid ka mid ah iibinta cnc-ga caadiga ah iyo kan ugu wanaagsan, oo laga sameeyay dhumuc laba jibbaaran oo laba jibaaran sariiraha sariirta, Hiwin square train iyo xawaare sare oo xawaare sare ku socda & darawal. Waxay sameyn kartaa goynta iyo xaraashka agabyo badan, sida MDF, acrylic, alwaax, PVC, iwm. Waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa xayeysiinta iyo warshadaha alwaaxa.
2. Iyada oo Shiinaha ay caan ku yihiin suuqyada caanka ah ee matoorrada leh iyo darawalada, Hiwin toosan hagitaan tareenka, qalabka XY axis iyo gudbinta rck, Z axis TBI saxda ah ee saxda ah ee loo yaqaan 'Ball Screws', in la hubiyo xawaaraha deg degga ah, awooda culeyska weyn, buuqa yar, iyo waqtiga dheer ee shaqeeya;
3. Nidaamka xakamaynta ee NC-Studio / Richauto Panel panel, Nidaamka qaboojinta hawada ee loo yaqaan '3.5 Kw / water qaboojinta lafdhabarta '3.
4.T-ballt worktable iyo alaabta wax lagu dhejiyo ee clamps waa fududahay in la isticmaalo.
5. Qaybaha kontaroolada elektaroonigga ah ee ka socda sumadda caanka ah ee Shiinaha sida shirkadda CHNT / DELIXI.
6. Nidaamka Aruurinta Saliidda-Gaari ee loogu talaggalay dayactirka (saliidda) waa mid ku habboon.
1. Warshadaha alwaaxa: samaynta alaabada alwaax, alwaax ka samaynta alwaax 3d ah, soosaarid farshaxan alwaax Hadliyayaal, qalabka wax lagu jimicsado ee miisaska, miisaska kombiyuutarka, miiska mashiinka tolo iwm.
2. Warshadaha wax soo saarka xayeysiinta: Xarfaha 3D ayaa calaamad u ah sameynta, goynta acrylic iyo qoritaanka.
3. Warshadaynta guddiga: qayb ka mid ah caymiska, guddiga acrylic, alaabooyinka kiimikada balaastigga ah, PCB, isku-darka fasalka, ABS, PP, PE iyo qaabab kale oo isku-dhafan oo ah miro-dhalaal.
4. Warshadaha qurxinta: shaashad isku laabashada, taargooyinka mowjadaha, looxyada xayeysiinta, sameynta saxiixa iyo sameynta astaanta.
5. Warshadaha Farshaxanka & Farshaxanka: Ku dheji dhagxaanta dabiiciga ah, qoryaha, bamboooyinka, marmar.
6. Wax-ka-shaqaynta: qorista, dhagaynta iyo goynta goynta acrylic, PVC, balaastig dhagaxyo dabiici ah iyo go'yaal bir-jilicsan iyo wixii la mid ah.
Qofka lala xiriirayo: EmilyQin,
1500 × 3000 × 200mm
Wadada Laba Jibaaran Hiwin 20mm
XY Rack wuxuu jeex jeexay Z TBI Ball
Stepper motor & darawalka
Golaha Kombuyuutarka ee Madaxa Bannaan
NC-Studio / A11 guddi
Ugu badnaan 20 m / min
Ugu badnaan 15 m / min
3.5KW hawo qaboojinta / 3.2KW biyaha qaboojinta ayaa ah
Previous: Laba Spindle Stone 3D Engraving Mashiin 1325
Next: Mashiinka router CNC router 1530 oo leh miis Aluminium T-slot miiska gudaha xakamaynta
Xarunta Afarta-Mashiinka CNC (Rotary Spindle)
Mashiinka CNC DA1625 / DA1530 Vacuum Table
CNC router 1515 oo leh miis T-ugu badnaan ah
Mashiinka alwaaxa CNC DA2030 / DA2040 Shaxda Vacuum
Naqshadaynta cusub ee culeyska mashiinka CNC router DA132 ...
Shandong DADI CNC Qalabka Farsamada Co., Ltd.